Manazava ny Semalta ny tanjona manan-danja amin'ny fampiasana mpizahatahiry tranonkala
Site mpitsikilo dia ireo botsika manokana voatahiry, izay mikaroka ny tranokalanao ho an'ny votoaty rehetraary asehoy azy ao anaty motera fikarohana amin'ny fahitana. Amin'ny tranga sasany dia mametraka votoaty ao amin'ny votoatin'ny tranonkala izahay amin'ny fomba tsy ahombiazan'ireo mpitsikilo ireomahita. Ny fampahalalana rehetra, izay tsy ho hitan'ny mpikirakira web dia matetika tsy voasokajy amin'ny Google. Vokatr'izany dia tsy manohana anao izypitsaboana na dia mandany ny ezaka SEO aza. Ity tsy fahalalana ity dia fahadisoana amin'ny aterineto izay ataon'ny olona rehefa miezaka manangana ny tranonkala - bunjo bungee chair sports authority.Vokatr'izany, zava-dehibe ny manamboatra mpitsikilo ao amin'ny tranokalanao mba hanatsara ny fanitsiana fototra sy hamaha ny fahadisoana, izay mety hampidina ny laharananao.
Ny manam-pahaizana Semalt Services Services, Jack Miller dia manazava ireo hevi-dehibe amin'ny fampiasana crawlers amin'ny tranokalanao.
Ny maha-zava-dehibe ny fampiasana mpitsikilo
Afaka manoro anao ny zavatra hitan'ny mpijery ny mpitsikilo. Satria maro amin'ireo mpandraharaha no manao tranokalaary mametraka votoaty, mieritreritra izy ireo fa ny mpanjifa azy dia hahita azy io tsara, ka manadino ireo antony hafa mety hahatonga azy tsy hitranga.Izany no trangan'ny mpikirakira ny tranokala. Miverimberina ao amin'ny tranokalanao ny tranokala mpikirakira tranonkala. Afaka maneho anao tsy hita izy ireofampahalalana momba ny vokatra ary koa fahadisoana maro atolotra ao amin'ny rafitry ny fitantanana ny votoatinao.
1. Sarin'ny pejy fanaraha-maso
Ny iray amin'ireo lafiny lehibe amin'ny SEO dia manara-maso ny fivoaran'ny pejy tsirairay. WebIreo mpihazakazaka dia afaka maka ny fanadihadiana manokana sy ny mombamomba ireo loharano malaza toy ny Google Analytics sy ny Google Search Console. Afaka manampy koa izy ireoManara-maso ny fampisehoana ny pejy samihafa ianao, manome anao fomba fijery manan-danja hanitsiana ny fampahalalana momba ny SEO tsara indrindra..
2. Famaranana diso diso
Ny iray amin'ireo antony mety hampidina ny fahombiazan'ny SEO dia olana mikasika ny tranokalanaohaingana sy valiny. Ny fandefasana mpizara tsotra dia mamerina mamaly mafy kokoa ny adiresy ao amin'ny tranokalanao. Azo atao ny mamaritra ny hadisoana sy ny redirectsMora ampiasaina avy amin'ny filahatr'izy ireo toy ny hadisoana 404. Azonao atao koa ny manome anao fanazavana amin'ny rohy efa naverinao ary ireo karazanatoerana nandefasany ny fampahalalana azy ireo.
3. Ireo mpiloka dia afaka mahita votoaty tsy hita
Ireo mpandidy dia afaka mamantatra ny "tsipika tsy misy". Ireo dia ao amin'ny tranonkalanao izay misy botstsy afaka mahazo. Amin'ny fampiasana an'io fampahalalana io, dia azonao atao ny manitsy ny fanovana ilaina ao amin'ny rafitra fitantanana ny votoatinao ary manondro ny votoatinao rehetra.Ny sokajin'ny vondrona sy vondrona miaraka amin'ny boaty fanamarinana tsy hita dia afaka mahazo fanampim-baovao ao amin'ny tahiry.
4. Famaritana sy fametrahana votoaty dika mitovy
Amin'ny fampiharana hafa, ny crawlers dia afaka mahita votoaty dika mitovy. Ity angona ity dia ny votoatinyizay miseho amin'ny rohy maromaro amin'ny milina fikarohana. Ny votoatiny toy izany dia ratsy amin'ny SEO anao ary tsy mitsahatra mampihena ny fahefan'ny tranonkalanaopejy. Ireo mpikaroka dia afaka manampy anao hamantatra ireo pejy toy izany ary hanampy anao amin'ny fametrahana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanovana 301.
Ny mpitsikilo amin'ny tranonkala dia afaka mamantatra ireo zavatra miafina samihafa ao amin'ny tranokalanao izay mety hisy fiantraikanyny tranonkala indirectly. SEO dia dingana sarotra, izay tsy midika fotsiny ny fanarahamaso sy ny fanarahana ny fampahalalam-baovao,fa ny fanavaozana tsy tapaka ny votoatinao. Ny sasany mpikirakira tranonkala sasany toy ny SEO Spider ao amin'ny Screaming Frog Semalt Analyzer manao toy ny mpitsikilo mpikaroka. Afaka manome anao fampahalalana sarobidy izy ireo, izay mety hanampy amin'ny fanaovana fanitsiana ilainany votoatin'ny tranonkalanao mba hahazoana ny laharana ambony amin'ny fangatahana fikarohana ara-boajanahary.